နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ ): January 2012
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပုံမြင်ရင်သိမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အစားအစာတွေ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း တစ်ခါတည်းဖေါ်ပြပေးထားတဲ့ Magazine လေးဖြစ်ပါတယ်။ 2012 ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် ထွက်လာတာပါ။ ကျွန်တော်အရှေ့မှာလည်း ဒီလို Exercise လေးတွေပါတဲ့ E-book လေးတွေကို တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 31.5 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ Real Desktop 1.71 Standard
ကျွန်တော်တို့ Desktop ကို ကလိလိုသူများအတွက်ပါ။ မိတ်ဆက်ပေးတာပါ။ သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ Features လေးတွေ တော်တော်များများပါဝင်ပါတယ်။ Windows 2000/XP/Vista/7 တွေကို Support လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်ခ်လေးမှာ သွားပြီးလေ့လာ နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ http://en.real-desktop.de/menu-clips.php ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့8.29 MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်အခု 2012 ရဲ့ အကောင်းဆုံး Antimalware ထဲက ဒုတိယမြောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Malwarebytes Anti-Malware PRO လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ နောက်ဆုံးထပ်ထွက်လာတာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်း တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အကောင်းဆုံး ဆိုတာတွေထဲကကို တစ်ခုခြင်းစီကို ဖြေးဖြေးခြင်း တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ Windows 2000, XP, Vista, နဲ့ Window7,32-bit နဲ့ 64-bit အားလုံးကို Support လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းခဏခဏတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Antivirus တစ်ခုထဲနဲ့တင် နေ့စဉ် ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ Internet ကလုံခြုံမှုရှိနေပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ Antivirus
နှစ်ခုတင်ရင်သာ ညိနိုင်ပေမယ့် ဒီလို ကောင်လေးတွေကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်း ဒါမျိုးတစ်ခု တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကတော့ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Update လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ကျွန်တော် Keygen လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 10.7 MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ Photo တွေကို သီးသန့် Recovery လုပ်လိုသူများအတွက်ပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ Recovery လုပ်တဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံးပြန်ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 7.25 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ Athtek Skype Recorder v4.5.1.9
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ Skype Recorder လေးပါ။ အများစုလဲသိကြမှာပါ။ သုံးရတာလဲမခက်ခဲ သလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 2.86 MB ပဲရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ audio နဲ့ video formats လေးတွေကို ဖမ်းယူပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ MP3, WMA, OGG, FLAC နဲ့ AVI formats လေးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖမ်းယူပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ Proxy ကျော်ရ ဆိုဒ်တွေထဲဝင်ရတာ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ကျွန်တော်အရင်ကလည်း အများကြီးတင်ပေးပြီးပါပြီ။ ဒါကလည်း နောက်ဆုံးထပ်ထွက်လာတဲ့ Update လေးဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကတော့ အရင် ကောင်လေးတွေ အသုံးပြုသလိုပါပဲ။ အထဲမှာ သူ့အတွက် Full Version လေးသုံးလို့ရအောင် Crack ဖိုင်လေးကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 6.22 MB ပဲရှိပါတယ်။ သုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ Firefox မှာ Plugin လေးသွင်းပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Proxy ကျော်ရတဲ့ ဒုက္ခကနေ ကင်းပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်အခု Win ISO ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Update လေးဖြစ်တဲ့ 6.1.3.4413 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အရှေ့မှာလည်း တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ISO files လေးတွေ CD/DVD/Blu-ray Disc image files လေးတွေကို Extract လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ISO image file အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CD/DVD/Blu-ray Disc တွေထဲကို Burn ပေးနိုင်ပါတယ်။ bootable CD/DVD/Blu-ray Disc စတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့သူအများစု ကတော့ သိကြမှာပါ။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ့်ကောင်လေးတွေကိုလည်း ကျွန်တော် Update လေးနောက်မကျအောင် တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့ 6.38 MB ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်အခု USB Safely Remove လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။နောက်ထွက်တဲ့ Update လေး
ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ flash drives, portable hard drives နဲ့ card readers တွေအတွက် အကုန်အသုံး
ဝင်ပါတယ်။ Crack ဖိုင်လေးကို Install လုပ်ထားတဲ့ Folder လေးထဲကို ကူးထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 7.67 MB ပဲရှိပါတယ်။အောက်မှာယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ Microsoft Office Ebook Collection (Myanmar version)
ဟိုတနေ့က ကင်မရာ Ebooks
Collection ကို ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီနေ့ ကျွန်တော် တင်ပေးချင်တာလေးက ရုံးသုံးကျောင်းသုံး
လုပ်ငန်းသုံးတွေတွက် မဖြစ်မနေ နားလည်တက်ကျွမ်းထားရမဲ့ Microsoft office စာအုပ် မြန်မာလိုတွေကို
စုစည်းပေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် စုစည်းပေးလိုက်တာ ပြည့်စုံချင်မှာ ပြည့်စုံပါလိမ်မယ်။
excel ပိုင်းဆို ၂၀၀၃ မပါဘူး။ ဒါပေ့မယ် ၂၀၀၇ ရော ၂၀၁၀ ရော မြန်မာလို ရှင်းပြထားတဲ့
စာအုပ်တွေပါပါတယ်။ တချို့စာအုပ်တွေက Microsoft Office XP တွေတွက်ပါ မြန်မလို စာအုပ်တွေပါ
ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်သလို အဆင်ပြေတဲ့ KMPlayer 3.1.0.0 R2 - 7sh3 LAV 28.01.2012 Build
ဒီ Player လေးကိုတော့ သုံးနေတဲ့ သူအများစုတော့သိကြမှာပါ။ သူ့အတွက်နောက်ဆုံး Update လေးထွက်လာ လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Video နဲ့ Audio formats လေးတွေ တော်တော်များများကို Support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြင် ကျွန်တော်တို့ System ထဲမှာ မရှိတဲ့ Code လေးတွေကိုလည်း သူကနေပဲ တစ်ခါတည်း Install လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Subtitle formats လေးတွေကိုလည်း Support လုပ်ပေးနိုင်မယ့် အပြင် skin interface လေးတွေကိုလည်း မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်လည်း Features လေးတွေ တော်တော်များများကို ပါဝင်နေပါသေးတယ်။ အောက်မှာ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 11.7 MB ရှိပါတယ်။
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဂိမ်း Software လေးတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တက်တဲ့ ပြဿနာလေးတစ်ခုပါ။ EXE ဖိုင်လေးတွေကို Password ခံထားတဲ့ ပြဿနာလေးပါ။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကတော့ ဒီကောင်လေးကိုယူထားလိုက်ပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်လဲဘယ်လောက်မှ မများတဲ့ အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ အထဲမှာသူ့အတွက် Keygen လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့2MB ကျော်ကျော်လေးပဲရှိ ပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော် Screensaver လေးတွေကို မတင်ပေးဖြစ်တာလဲကြာ သွားပါတယ်။ အခုတော့ အဆင်ပြေတာနဲ့ အဆင်သင့်လေးလဲရတာနဲ့ တင်ပေးဖြစ်သွားတာပါ။ Run ပြီးသုံးရင် ရပါပြီ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 10.3 MB ပဲရှိပါတယ်။ အသံကတော့ မိုးရွာ မိုးခြိမ်း တဲ့အသံပါ။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ Activators များစုစည်းမှု
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ Window တွေမှာ Keys တွေတောင်းတယ် တခြား genuine ကိုက်တယ် ဘာညာပေါ့ဗျာ။ ဖြစ်နေကြတာများပါတယ်။ ကျွန်တော်အရှေ့မှာလည်း အများကြီးတင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ နောက်ဆုံး Update ထွက်တိုင်းကိုလည်း ကျွန်တော်မှီအောင်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ ဒီအခက်အခဲတွေအတွက် အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် Activators လေးတွေ Loaders လေးတွေ စုစည်းထားတာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ MB 100 ကျော်တော့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အားလုံး အဆင်ပြေအောင် နှစ်နေရာပဲခွဲတင်ပေးပါ့မယ်။ အောက်မှာ အသေးစိတ် ပါဝင်တဲ့ ကောင်လေးတွေကို ထပ်ပြီးရေးပေးထားပါတယ်။ Microsoft Office Activation Tool's တွေကအစပါဝင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။ Camera Ebooks Collection ( Myanmar Versions)
Ebooks Collection ( Myanmar Versions)
ပိုနေလို့လားမသိဘူး ပိုစ့်တွေတော့ တောက်လျှောက်ရေးနေဖြစ်တယ်။ အခုလည်း ကျွန်တော်
Crazy ကျကျ လေ့လားခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ပေးချင်ပါသေးတယ်။ ဘာစာအုပ်တွေ ဖြစ်မလဲ့ စာဖတ်သူ
စိတ်ထဲက သိနေလောက်ပါပြီ။ ခေါင်းစဉ်ကြီးပါနေတာကို :P ။ ကျွန်တော် ကင်မရာအကြောင်းကို
အသေးစိတ်တော်တော်လေး လေ့လာဖြစ်ပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာတွေလည်း တပုံတခေါင်းပဲ့ တကယ်ပြောတာ။
ပြောလိုက် စာဖတ်လိုက် လက်တွေ့လုပ်လိုက်နဲ့ မှ တဖြေးဖြေး နားလည်လာတာ အရင်က ISO Mode
ဆိုတာ ဘာလည်း CCD ဆိုတာ ဘာလည်း ဘာတွက်လည်း ဘာတွေ လုပ်ပေးလည်း တခုမှ သိဘူး။ ကင်မရာရိုက်တက်အောင်များ
ဘာခက်လည်းကွာလို့ တော့ မထင်လိုက်နဲ့နော် ဘယ်ပညာမှ မလွယ်တာတော့ အမှန်။
လက်ရှိ စာဖတ်သူလက်ထဲ့ကို ကင်မရာ တလုံးရောက်လာပြီထားပါစို့ ဒီချိန်မှာ ညပိုင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်
Focus တွေ 3G နှင့် 4G ကြားကွာခြားချက်များ
အားလုံးပဲ့ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်တိုးတက်နေတဲ့ နည်းပညာတွေကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ မထွင်နိုင်သေးသလို သူများ ထွင်တဲ့ နည်းပညာတိုင်းကို သိဖို့ ကြိုးစားနေကြတာလည်း မမှီနိုင်သေးတာတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ့ ဒီလိုပါပဲ့ ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာ လက်လှမ်းမှီဖို့ တိုးတက်ဖို့ ဘယ်လို ကြိုးစားကြရဦးမယ်ဆိုတဲ့ အသိ လေးတွေကိုတော့ လူတိုင်းရင်ထဲ့စွဲထားစေချင်ပါတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ အစပြုပါရစေ..
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့3G နဲ့ 4G ကို ကွာခြားချက်တွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။ ကဲ့ ဘာတွေ ကွာလည်း မသွားခင်မှာ ဒီ 3G နဲ့ 4G က Phone တွေ Tablet တွက် Mobile internet ဆိုတာကို အရင် သိထားပေးရပါမယ်။ ဒီကနေစလို့ သူတို့ နှစ်ခု ရဲ့ မတူညီတဲ့ ကွဲပြားချက်လေးတွေကို ကျွန်တော် ဖော်ပြရေးသားချင်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေကတော့ ….
ဒီနေ့ လက်ဆောင်လေး တစ်ခု ထပ်ပေးမယ်ဗျ။ ယူချင်လားတော့ မသိဘူး။ အဆင်ပြေဖို့တွက် collection လုပ်ထားတာ။ တော်တော်များများ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ error တွေထဲ့မှာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ အထဲ့မှာပါတဲ့ antivirus တင်ပြီး ပြန်ဖြုတ်လို့မရတာတို့ Registry မှာ ကျန်နေလို့ error ခဏခဏ တက်တာတို့ ကြားဘူးတွေ့ဘူးကြတယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ်နော် အဲ့ Error က ချွေးပြန်တယ်။ မသိရင် ဘယ်က အစ ရှာရမှန်းမသိဘူး။ ဥပမာ AVG လို Antivirus တင်ပြီး ပြန်ဖြုတ် KIS ကို တင်ကြည့်။ Error တွေ တက်နေရော.. ဒီပြင် ဆော့ဝဲသွင်းရင်လည်း ပြသနာ ရှာနေပြန်ရော ။ ဒီအတွက် ဘာ error မှ မတက်ပဲ့ ပြန်ဖြုတ်လို့ ရတဲ့ Antivirus Uninstaller တွေပေးမယ်။ Topaz Star Effects 1.0.0 for Adobe Photoshop x32/x64
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ Photoshop သမားများအတွက် Plugin လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှေ့မှာ လည်း Plugin လေးတွေတော်တော်များများ တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါလေးကတော့ နောက်ထပ် ထပ်ထွက်လာတဲ့ Update လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Plugin လေးတွေမတင်ပေးဖြစ်တာလဲ ကြာသွားတာကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 31.3 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ဒီကောင်လေးကတော့ ကျွန်တော် ရှေ့မှာလည်း တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကတော့ နောက်ဆုံးထပ်ထွက်လာတဲ့ Update လေးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အတွက် ကီးလေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖြည့်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ 3D Wallpaper လေးနဲ့ အတူ Screensaver လေးပါတစ်ခါတည်းပါဝင်ပါတယ် ။ သုံးကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 25.3 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
MathSol MultiplexCalc လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ Windows တွေအတွက် desktop calculator လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ mathematical functions ပေါင်း 100 ကျော်ကို အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျောင်းသားတွေအတွက် လည်းအများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်။ အရှေ့မှာလည်း ကျွန်တော် အများကြီးတင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကတော့ နောက်ထပ်ထပ်ထွက်လာတဲ့ Update လေးဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးအတွက်ကိုလည်း ကျွန်တော်အပိုင်းသီးသန့်ခွဲပြီး တင်ပေးပါ့မယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ခဏလောက်သည်းခံပေးပါခင်ဗျာ။
ဒါလေးကတော့ Universal archiver လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယနေ့ခောတ် popular formats အားလုံးကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Support လုပ်ပေးတဲ့ Format လေးတွေကတော့ ZIP, RAR, 7-ZIP, CAB, LHA (LZH), TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, BH, ARJ, ARC, ACE, ZOO, GZ, BZIP2, XXE, MIME, UUE, XPI , EAR, WAR, REP, JAR, BK, QWK, Quake PK3, skins WinAMP, ISO, BIN, IMG နဲ့ NRG စတဲ့ Format လေးတွေကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့အတွက် Features လေးတွေကို ကျွန်တော်အောက်မှာ ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ် လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Internet Download Manager မှာ နောက်ဆုံး Update လေးဖြစ်တဲ့ Build 16 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ IDM ကိုတော့ ကျွန်တော် Update ဖြစ်တိုင်းနောက် မကျအောင် တင်တင် ပေးသွားမှာပါ။ အခုလည်း IDM ကို Install လုပ်ရတာအဆင်မပြေသူများအတွက် ဒီလင့်ခ်လေး မှာရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့5MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက် ပါဗျာ။ Firefox အားလုံး အထိ Support လုပ်ပေးပါတယ်။
အပိုင်း (၂) ပါ အပိုင်း (၁) ကို ဒီနေရာမှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ Window editions6မျိုးအကြောင်း..
ဒီအောက်က window7သုံးသပ်နိူင်းယှဉ်ချက်များကို ကိုကျော်ဇင်သန့်ရေးပေးထားတာပါ။ ဒါပေ့မယ် ဘယ်လင့်မှာမှန်းမသိလို့ ကျွန်တော့ရဲ့ Ms doc ကနေ ပြန်ကူးယူဖော်ပြပေးထားတာပါ။ နားလည်ပေး စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တနေရာတည်းမှာ အကုန်သိအောင်လို့ စုစည်းပေးချင်တာကြောင့် လည်း ပြန်ရှာပီးထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ Windows7သုံးသပ်နှိုင်းယှဉ်ချက်များ
စပါမယ်။ အစ်ကို့ကို တစ်ခုလောက် ကူညီပါအုံး အစ်ကို့ဖုန်းက
Nokia C6-01 ပါ သူ့အတွက် မြန်မာဖောင့် သုံးလို့ရ-မရနဲ့ အစ်ကို့ရဲ့ OS က Symbian^3
OS ပါ မြန်မာဖောင့်သုံးချင်ရင် Symbian Anna OS ကို upgrade လုပ်ရင်ရတယ်လို့ အကြမ်းဖျဉ်းသိရပါတယ်
အဲဒီ Symbian Anna OS ကို ဘယ်လိုမှ ရှာဒေါင်းလို့မရလို့ ညီလေး ကူရှာပေးပါအုံးနော် နောက်ပြီး
တစ်ခုလောက် ထပ်မေးချင်တာကတော့ window မှာ password ခံထားတာကို software မသုံးဘဲ ကျော်တဲ့နည်းရှိတာကို
နေပြည်တော်မှာနေတုံးက တွေ့ဖူးပါတယ် ညီလေးကတော့ သိပါလိမ့်မယ် အဲဒီနည်းကလေးလည်း ပြောပြပေးပါနော်။
ကြုံရင်တော့ လာခဲ့ပါဦးမယ်။ တခုတော့ ကြိုတောင်းပန်ထားချင်ပါတယ် လက်တွေ့မကျတဲ့ အပိုင်းနဲ့
English လို ရေးထားတာလွယ်ကူတယ် မခက်ခဲ့တဲ့ အရာတွေဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် နက်ပေါ်မှာ ပြီးပြည့်စုံအောင်
မျှဝေထားတာရှိရင် လင့်ကိုပဲ့ ပြန်ညွှန်းပေးပါရစေ.. အကိုမေးထားတာကို အတိအကျ ဖြေပေးဖို့ဆိုတာကလည်း လက်ထဲ့မှာ
ဖုန်းက nokia ဖုန်း မဟုတ်တော့ မစမ်းပေးလိုက်နိုင်တော့ဘူး။
Window7,XP နှင့် Ubuntu
DVD Collections and Sharing အပိုင်း (၁)
စာမရေးဖြစ်တာ အတော်ကိုကြာသွားပါပြီ။ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတော့ လျှောက်လည်ပတ်နေတာရော ပြည်တော်ကို
ပြန်တော့မှာရော ဆိုတော့ မြန်မာ မိသားစုမှာလည်း
စာမရေးဖြစ်တော့သလို ကျွန်တော် စာရေးနေကျ ဖိုရမ်တွေ အကုန်လုံးမှာ စာမရေးဖြစ်တော့တာပါ။
ဒီမှာမှ မဟုတ်ဘူး ။ ဘယ်ဖိုရမ် ဘယ်ဆိုဒ်မှာမှ မရေးဖြစ်တော့တာပါ။ အရင်က ဘာပဲ့ ဖြစ်ဖြစ်
တနေ့ကို တပိုစ့်လောက်တော့ ရေးဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့လည်း ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ window 8 လည်းပေါ်ကာနီးမို့
Window7နဲ့ XP တုန်းက စုထားတဲ့ Collection လေးတွေကို ပေးချင်တာနဲ့ ပိုစ့်တခု ရေးဖြစ်တာပါ။
window 8 အကြောင်းကိုလည်း ညီမလေး တစ်ယောက် တောင်းဆိုထားတာ ရှိပါတယ် ။ ရေးပေးဖို့ ပြင်ထားပြီးပါပြီ။
မကြာမှီလာမည် မျှော်ပေါ့နော် .. :P
ကျွန်တော် နောက်ထပ် Ebooks တွေကို မျှပေးဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီမှာပဲ့ လာတင်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ဟိုတလောကတော့
ဆိုဒ်လေး တဆိုဒ်လုပ်ပြီး Ebook တွေကို တင်မယ် စိတ်ကူးခဲ့တာ နောက်ပိုင်းတော့ ဆိုဒ်က
ပြင်ရမှာ နဲ့ ဘာနဲ့ဆိုပြီး ကျွန်တော် ဆိုဒ်ဘက်ကို မလှည့်တော့ပဲ့ ပိုစ်တပို့စ်အနေနဲ့ပဲ့
တက်မယ်ဆိုပြီး တွေးထားတာပါ။ ဒါကတော့ ကြော်ငြာဝင်တာပါ။ Animated Wallpaper Maker 3.0.3
ဒါလေးကတော့ ကြာပါပြီ။ ကျွန်တော့်အစ်ကို တစ်ယောက်ကလည်း တောင်းထားတာလေးရှိတာနဲ့ တင်ပေးဖြစ်သွားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ animated pictures လေးတွေ animated desktop background wallpapaer လေးတွေပြုလုပ်လိုသူများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲမှာ သူ့အတွက် ကီးလေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 10.7 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်အခု Animation လေးတွေ ပြုလုပ်လိုသူများအတွက် Animation Maker လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အထဲမှာ ကီးလေးနဲ့ အတူ Regedit ဖိုင်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ ထည့်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့ 10.6 MB ရှိပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံးအသုံးပြု နိုင်တဲ့ animation software လေးဖြစ်ပါတယ်။ websites တွေအတွက် animated gifs လေးတွေကို minutes ပိုင်းအတွင်းပြုလုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။
ဒီ Registry Cleaner Free လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ Registy ထဲမှာရှိတဲ့ registry errors တွေကို ရှင်းလင်းပေးခြင်း registry files လေးတွေကို repair လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း ၊ DLL errors တွေကိုလည်း remove လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ PC ရဲ့ performance တွေကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးတိုးမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ Tool လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 3.90 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်အခု n-Track Studio နောက်ဆုံး Update လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ အရင်ကအစ်ကို
တစ်ယောက် အဆင်မပြေဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်  ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ စက်3လုံးမှာ စမ်းပြီးမှတင်ပေးလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်။ Wave editing လုပ်လိုသူများအ တွက် အကောင်းဆုံး ဖန်တီးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Keygen လေးမှာ Reg Code 1 နဲ့ Reg Code2ဆိုပြီးပါပါတယ်။ အမည်ကိုတော့ မိမိ တို့နှစ်သက်တဲ့ အမည်လေးပေးပြီး Generate လုပ်ပေးလိုက်ရင် Codes လေးတွေရပါပြီ။ ဒီကောင်လေးက တော့ recording studio အတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်တဲ့ multitrack recorder လေး ဖြစ် ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သီချင်းတွေကို တွဲပေးခြင်း၊ အသံသွင်းခြင်း၊ အသံချိန်ပေးနိုင်ခြင်းစတဲ့ အပိုင်း လေးတွေနဲ့ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေလို့ Update ဖြစ်တာလေးကိုရှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါလေးကိုတော့ ကျွန်တော်အရင်ကလည်း တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကတော့ 2012 အတွက် ထွက်လာတဲ့ နောက်ဆုံး Update လေးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အတွက်လဲ Full Version လေးရအောင် ကီးလေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုနေတဲ့ အစ်ကိုတွေအစ်မတွေကတော့ ဒီကောင်လေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 6.97 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ သူ့ရဲ့ Features လေးတွေကိုလည်း အောက်မှာ ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ဒီနေ့ ကျွန်တော့်အစ်ကိုတွေအတွက် သုံးရတာလည်းလွယ် ကူပြီးအဆင်ပြေတဲ့ Recorder လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့ MP3, WMA, WAV, AC3, M4A, AAC စတဲ့ Audio Format လေးတွေကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သီချင်း Sites ပေါင်း 2000 ကျော်ကနေပြီးတော့ သီချင်းတွေကိုလည်း Free Download လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Audio Files လေးတွေကိုလည်း မိမိတို့ လိုအပ်သလို ဖြတ်တောက်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီကောင်လေးရဲ့ Features လေးတွေကိုတော့ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့ 8.86 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
အခုကျွန်တော် Windows7အသုံးပြု သူတွေအတွက် Local Aera Network ( Lan ) ထဲမှာ File Sharing ပြုလုပ် တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို မေးထားတဲ့ အကို တစ်ယောက်လည်း ရှိတာနဲ့ ကျန်တဲ့
မသိသေးတဲ့ သူများလည်း အဆင်ပြေအောင် ရေးပေးသွားပါမယ် ..ကျွန်တော် အားလုံး အဆင်ပြေအောင် အောက်မှာ ပုံလေးတွေ နဲ့ တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းပြေပေး သွားပါမယ် .. သိပြီး သားသူများကတော့ သည်းခံ ပေးပါခင်ဗျာ .. မသိသေးတဲ့ သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ..
တောင်းထားတာလေး ရှိတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကို ကျွန်တော်တို့ ဘာအတွက် အသုံးပြုတာလည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာ
Flash Animations တွေ ကြည့်နိုင်ဖို့ အတွက် Adoble Flash Player ကိုတင်ရသလို မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ .NET Framework လိုအပ်တဲ့ Program တွေကို အသုံးပြုချင်တဲ့ အခါမှာ .NET Framework ကို Install လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် .. Windows7, Windows Vista တို့မှာ .NET Framework ပါပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် Version
နိမ့်တဲ့ အတွက် အသုံးပြုလို့ မရတာမျိုးတွေ ရှိတက်ပါတယ် .. အခုကျွန်တော် တောင်းထားတဲ့ အကိုတစ်ယောက်လည်း ရှိတာနဲ့ တစ်ခြား လိုအပ်တဲ့ သူတွေရှိရင်လည်း
အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ .. Firefox မှာ အသံမလာဘူးဆိုရင်
အခု ကျွန်တော် မေးထားတဲ့ အကိုတစ်ယောက်လည်း ရှိတာနဲ့ တစ်ခြား အခက်အခဲ ရှိတဲ့ သူတွေလည်း အဆင်ပြေအောင် Firefox မှာ အသံမလာဘူး ဆိုရင် ဖြေရှင်းလို့ ရမယ့် နည်းလမ်းလေးကို Video Tutorial
လေးရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. နည်းလမ်းလေက လွယ်ပါတယ် .. သေချာ ရှင်းပြပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ပြန်မရေးပေးတော့ပါဘူး .. ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ သီချင်းတွေကို Audio Player တွေနဲ့ ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ အသံလာပြီး Firefox
မှာ ဖွင့်မယ် ဆိုရင် အသံမလာတာမျိုး ကြုံတွေ့နေရတဲ့ သူတွေအတွက် အခုနည်းလေးက
အထောက် အကူ ပေးပါလိမ့်မယ် .. အောက်မှာ ကျွန်တော် နှစ်နေရာ ခွဲတင်ပေးထားပါတယ် .. အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ချသွားလိုက်ပါ .. Corel Draw Graphic Suite X4+Keygen
မေးလ်ထဲမှာ အမတစ်ယောက် တောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. Corel Draw Graphic Suite X4 ကို Full Version လေးနဲ့ သုံးလို့ ရအောင် Keygen
လေးပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကို ဒီဇိုင်း ဖန်တီးသူတွေ ၊ မြန်မာမှု အနုပညာတွေကို ထိန်းသိမ်းချင်သူတွေ ၊ ကွန်ပျူတာ ပန်ချီဆွဲ ချင်သူတွေ သုံးဆွဲ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒီဇိုင်းပိုင်း ဖန်တီး ချင်သူတွေ အတွက်တော့ ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုပြီး ကောင်းကောင်း ဖန်တီး နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ..ကျွန်တော် Mediafire ကနေ အပိုင်း ( ၆ ) ပိုင်းခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် .. အပိုင်း အားလုံးကို ဒေါင်းလော့ ချပြီးရင် အပိုင်း ( ၁ ) ကနေစပြီး ဖြည်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွား ပါလိမ့်မယ် .. အင်တာဗျူး ဖတ်ချင်သူများအတွက်
ကျွန်တော်အခု ကျွန်တော့်ရဲ့ အစ်ကိုတွေအတွက် Windows7Manager Update လေးထပ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ System တွေနဲ့ hardware information တွေကိုလည်းအသေးစိတ်ကအစ ကြည့်ရှူနိုင်ခြင်း ၊မိမိတို့စက်ထဲမှာရှိတဲ့ running processes နဲ့ threads တွေရဲ့ အချက်အ လက်တွေ ကိုလည်းအသေးစိတ်ကြည့်နိုင်ခြင်း၊Windows7Manager မှာ 1-clicking cleans system automatically လည်းပါဝင်ခြင်း၊windows startup and shutdown speed ကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း၊ hardware တွေရဲ့ system speed နဲ့ performance တွေကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း၊မ လိုအပ်တဲ့ system tasks တွေကိုလည်း Turn off လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ Registry Cleaner ကလည်း မိမိတို့ရဲ့ incorrectly linked registry entries အလိုအလျောက်ဖယ်ရှားပေးခြင်း နဲ့စတဲ့ Features လေးတွေတော်တော်များများကိုပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နောက်ထပ် Update လေးတွေထွက်လာတိုင်းလဲ ကျွန်တော်အချိန်မှီတင်ပေးသွားပါ့မယ်။ Easy Poster Printer 4.0.1.0
ဒါလေးကတော့ Poster Printer လေးပါ။ ကျွန်တော်အရင်ကလည်း ဒါမျိုးလေးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ နောက်ထပ်ထပ်ထွက်လာတဲ့ Update လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်သက်သလိုပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 55.2 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော် Platinum Hide IP နောက်ဆုံး Update လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Proxy ကျော် သုံးနေရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ Patch ဖိုင်လေးကို Install လုပ်ထားတဲ့ Folder လေးထဲထည့်ပြီး Install လုပ်ပေးလိုက်ရင် Full Version လေးသုံးလို့ရပါပြီ။ ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ Firefox အောက်မှာ ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Install လုပ်ပေးလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ Proxy ကျော်စရာလိုတော့ပါဘူး။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 6.29 MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်အခု FastPictureViewer သုံးလိုသူများအတွက် Home Basic လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အထဲမှာ Register လုပ်ဖို့အတွက် regedit ဖိုင်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ languages လေးတွေကိုလည်း chinese, French, German, Italian, Japanese, Russian နဲ့ Spanish စတဲ့ Languages တော်တော်များများကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်ခ်လေး မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 28.4 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
iMacsoft iPhone Photo to PC Transfer 2.8.0 Build 0116
ဒါလေးကတော့ နာမည်မြင်ရင်ကိုပဲသိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Iphone ကနေ PC ကို Transfer လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Full Version လေးသုံးလို့ရအောင် အထဲမှာ Key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 6.88 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်ရှေ့တွေမှာလည်း တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကတော့ နောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ Update လေးဖြစ်ပါတယ်။ အများစုလဲ သိပြီးသားပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့စက်ထဲမှာ လိုအပ်နေတဲ့ Driver လေးတွေကို ဒီကောင်လေးကနေပဲ တိုက်ရိုက် Download ဆွဲပေးပြီး Install လုပ်ပေးပါတယ်။ Date Out နေတဲ့ Drivers လေးတွေကိုလည်း ဒီကောင်လေးကနေပဲ Update လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် ကတော့7MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ဒီကောင်လေးကတော့ scientific freeware calculator လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ high school နဲ့ university students တွေအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်း Calculator လေးတွေတော်တော်များများ တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ နောက်ထပ် ထွက်လာမယ့် Update လေးတွေကို ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ အခုဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 4.15 MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ Internet Download Manager နောက်ထပ် Update လေးထပ် ထွက်လာလို့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ် .. Update ကိုမှ အသုံးပြုချင် သူတွေ အတွက်ပါ .. အရင်သုံးနေတဲ့ အတိုင်း ဆက်သုံးချင်သူများ အတွက်ကတော့ Update တောင်းရင် မပေးပဲ ဒီတိုင်း ဆက်သုံးမယ် ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ် .. ကျွန်တော် IDM ကို Full Version နဲ့ သုံးလို့ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ဒီပို့စ်လေး မှာရေးပေးထားတာ ရှိပါတယ် .. မလုပ်တက်သေးသူများ သွားပြီးကြည့်လိုက်ပါ .. Update လေးကိုမှ သုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ .. Photo Makeup Editor 1.85 Full
အခုကျွန်တော် ဓာတ်ပုံအလွယ်တကူ ပြုပြင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် Photo Makeup Editor
လေးတင်ပေးလိုက် ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကို ကျွန်တော်တို့ ဘာအတွက် အသုံးပြုနိုင်လည်း ဆိုတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ရှိနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို မိမိတို့စိတ်ကြိုက် အလှပြင်ယူလို့ ရတဲ့ သဘောမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. အပြင်မှာ မိတ်ကပ်လိမ်း သလိုပဲပေါ့ဗျာ .. အသုံးပြုရတာ လွယ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Full Version လေးနဲ့ အသုံးပြု လို့ရအောင် Serials Key လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် .. လိုအပ်လို့ အသုံးပြုချင်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ .. Windows Loader v2.1 By Daz
ကျွန်တော် Windows Loder နောက်ထပ် Update ထွက်တာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ Windows တင်ပြီးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Windows က Active မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် အခုကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ Windows Loader လေးကို အသုံးပြုပြီး Active လုပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ပါတယ် .. အခုကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်လေးကို Run လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Install ပေးလိုက်ပါ .. ပြီးရင် Restart တောင်းတဲ့ အခါမှာ Restart ချပေးလိုက်ယုံပါပဲ .. Windows ပြန်တက်လာတဲ့ အချိန်ကျရင် Windows က Active ဖြစ်သွားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် .. ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Windows
အမျိုးအစားတွေကို ကျွန်တော် အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ ဒီရက်ပိုင်း လုပ်ဖြစ်တဲ့ ဆိုဒ်လေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးချင်ပါတယ် .. နောက်ရက်တွေ ကစပြီး
မေးခွန်းတွေ မေးထားတာတွေကို မေးလ်က ဖြေတာပဲ ဖြစ်စေ ပို့စ်အနေနဲ့ ရေးပြီး ဖြစ်စေ ဖြေပေးသွား ပါတော့မယ် .. စာဖတ်ချင် သူတွေအတွက်လည်း ကွန်ပျူတာနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို ထပ်ပြီးတော့ ရေးပေးသွားပါမယ် .. အခု ကျွန်တော် မိတ်ဆက် ပေးချင်တဲ့ ဆိုဒ်လေးကတော့ မြန်မာဘလော့များ စုစည်းမှု ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒီဆိုဒ်လေးကို ကျွန်တော် လုပ်ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာကလည်း အကြောင်း ရှိပါတယ် .. ကျွန်တော်လည်း Blogger တစ်ယောက်ပါပဲ နည်းပညာ မျှဝေတဲ့ Blogger
တစ်ယောက်ပေါ့နော် .. အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘလော့ မိတ်ဆွေများ အပေါ်မှာ တာဝန်မကျေ ခဲ့တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် .. ဘလော့ အကြောင်းနဲ့ ပါတ်သတ်ရင် ကျွန်တော် အများကြီး ပြန်ပြီး မမျှဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး .. ကျွန်တော်လည်း Blog
သမား တစ်ယောက်ပါပဲ ဒါပေမယ့် ဘလော့နဲ့ ပါတ်သတ်ရင်တော့ ကျွန်တော် ပြန်ပြီးမျှဝေတာ အရမ်းနည်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ် . အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘလော့ မိတ်ဆွေတွေ အပေါ်မှာ အကြွှေးတွေ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း မမှားဘူးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ် .. ပြီးရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ ဘလော့ မိတ်ဆွေ
များအတွက် သက်သက် လင့်ချိတ်ပေးထားတာ မရှိပါဘူး .. ဒါကြောင့် ဘလော့မိတ်ဆွေ များအားလုံးကိုလည်း အလွယ်တကူ ချိတ်ပေးပြီးသားဖြစ်အောင် ကျွန်တော့် ဆိုဒ်လေးကို လာလည် ကြတဲ့သူများ အနေနဲ့လည်း နောက်ထပ် နည်းပညာ ဘလော့တွေကို သွားချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သုတ ၊ ရသ နဲ့ ဗဟုသုတ တွေကို ဖတ်ရှုချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ သွားရောက်လို့ အဆင်ပြေအောင် ဒီဆိုဒ်လေးကို လုပ်ဖြစ်သွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. သွားရောက် လေ့လာချင်သူတွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် အမျိုးအစားအလိုက် ခွဲပြီး လင့်တွေ ချိတ်ပေးထားပါတယ်
..တက်နိုင်သလောက် စုစည်း ပေးထားပေးမယ့် ပြည့်စုံမှုမရှိသေးဘူး ဆိုတာတော့ သိပါတယ် .. အဲ့ဒီအတွက် ဒီဆိုဒ်လေးမှာ လင့်မချိတ်ရသေးတဲ့ ဘလော့ မိတ်ဆွေ များကိုလည်း မိမိတို့ရဲ့ ဆိုဒ်လိပ်စာ လေးတွေကို ချန်ထားခဲ့ပေးစေချင်ပါတယ် .. နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ လေ့လာတဲ့ သူတွေအဆင်ပြေအောင် အသုံးဝင်မဲ့ သိသင့် ဖတ်သင့်တဲ့ ဆိုဒ်လိပ်စာတွေကိုပါ လင့်ချိတ်ပေးထားပါတယ် .. အဲ့ဒီအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ သိသင့် ဖတ်သင့်တဲ့ ဆိုဒ်လိပ်စာတွေ မိမိတို့ စီမှာ ရှိတယ် ဆိုရင်လည်း လိပ်စာလေးတွေ ထားခဲ့ စေချင်ပါတယ် .. အများကိုလည်း မျှဝေပြီးသား ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ .. ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဒီဆိုဒ်လေးကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် အားလုံးအတွက် တစ်ထောင့် တစ်နေရာကနေ အထောက်အကူ ပြုခဲ့မယ် ဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ် ..
မြန်မာဘလော့များ စုစည်းမှုကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလိပ်စာ ကနေတစ်ဆင့် သွားနိုင်ပါတယ် http://myanmardaily-news.blogspot.com/ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ …. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
ဒါလေးကတော့ Websites သမားအများစုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Flash Website Builder လေးတစ်ခုပါ။ အထဲမှာ သူ့အတွက် Keygen လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ သူ့အတွက် Features လေးတွေကို အသေးစိတ်အထဲမှာ ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ flash website တွေကို Browsers လေးတွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Flash/programming skills တွေ Flash software တွေမလိုပါဘူး။ Windows 95/98/ME/2000/NT/XP/Vista/7 အားလုံး Support လုပ်ပေးပါတယ်။ အထဲမှာလည်း Features လေးတွေထပ်ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 21.34 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်လည်းဒါလေးလမ်းကြုံတွေ့တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ Tattoo ပုံလေးတွေ စုထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်များပါတယ်။ Tattoo ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေမှာပါ။ အထဲမှာလည်း အမျိုးအစားအလိုက် ခွဲထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ဥပမာအနေနဲ့ အောက်မှာ နှစ်ပုံသုံးပုံတင်ပေးသွားပါ့မယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 259 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်အခု ကျွန်တော်လည်းသုံးနေတဲ့ ကောင်လေးပါပဲ။ ကျွန်တော်အရှေ့မှာလည်း တစ်ခုတင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါလေးကတော့ နောက်ဆုံး ထပ်ထွက်လာတဲ့ Update လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စက်ထဲ Antivirus တစ်ခုတင် ထားရုံနဲ့ အင်တာနက်ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုနေတာက လုံခြုံပြီလို့လဲမဆိုနိုင်ပါဘူး။ အခုလို Spyware, Malware ကိုကာကွယ်နိုင်မယ့် System tool လေးတစ်ခုခုကို တင်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းပြီပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော် တို့ Antivirus တွေသာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အဆင်မပြေပေမယ့် ဒီကောင်လေးတွေကတော့ နှစ်ခုတင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စက်ထဲကို ဝင်လာနိုင်မယ့် Trogran Horse တွေနဲ့ အခြားအခြား Threats တွေကို အထိရောက်ဆုံး ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုနောက်ထွက်လာတဲ့ Update လေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 17.17 MB ပဲရှိပါတယ်။သုံးကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
နေမင်းမောင် မှားခဲ့ရင် ဒီပို့စ်လေးနဲ့ တောင်းပန်ပါတ...